(ဂျပန်သီချင်း)　Ga Ke No UeNo Po Nyo
အခုမိတ်ဆက်တင်ပြချင်တဲ.အကြောင်းကတော့ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. ရေပန်းအစားဆုံးကလေးသီချင်းတစ်ပုဒ် အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းနံမယ်ကတော့ “ချောက်ကမ်းပါးကြီးပေါ်က ပို.ညို” တဲ.။
ချောက်ကမ်းပါးကြီးပေါ်က ပို.ညို သီချင်းဟာ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၁၉ရက်နေ.မှာ တိုးဟိုး ကုမ္ပဏီ (Toho Company, Limited)ကနေထုတ်လုပ်ခဲ. ပြီး၊ Studio Ghibli, Inc. စတူဒီယိုမှရိုက်ကူးခဲ.တဲ. “ ချောက်ကမ်းပါးကြီးပေါ်က ပို.ညို”
ကာတွန်းရုပ်ရှင်မှ ဇတ်သိမ်းတေးတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ မီယာဇာ့ကီ (Director MIYAZAKI Hayao)ရဲ. ၂၀၀၁ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးပြန်လည်ထုတ်လုပ် ခဲ.တဲ. ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မြို.လေးတစ်မြို.ကို နောက်ခံထားပြီး လူဖြစ်ချင်နေတဲ. ငါးမလေး
“ပို.ညို” နဲ. ၅နှစ်အရွယ်လူငယ်လေး”ဆိုးဆုကဲ”တို.ရဲ. အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ခုလိုမွေးဖွားကြီပြင်းလာရတာ ကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ.အကြောင်း
ခလေးဘ၀က “ဂတိ” တစ်လုံးဟာ တသက်လုံးမမေ.နိုင်ဘူးဆိုတဲ.အကြောင်း
အရေးကြီးတဲ့ အရာအားလုံးဟာ ကိုယ့်ရဲ.၁၀ပေပတ်လည်(အနီးအနား)အတွင်းမှာရှိနေကြတယ် ဆိုတဲ.အကြောင်းဆိုတာတွေပဲဖြစ်တယ်။
တေးဂီတထုပ်လုပ်သူ “ဖူဂျီအိုကာ ဖူဂျိမာ့ကိ” (FUJIOKA Fujimaki)ရဲ. ၄ချပ်မြောက်ဓါတ်ပြားဖြစ်ပြီး တေးဆိုသူ “အိုအိုးဟာ့ရှိ နိုဇိုးမိ” (OOHASHI Nozomi)ရဲ. ပထမဆုံး CD ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာ CD ရောင်းအားဟာ၊ ချပ်ရည်၅သိန်းဖြစ်ပြီး ကွန်ပြူတာနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းများက တဆင့်ယူ download　အကြိမ်ပေါင်းကတော့ ၃သန်းရှိပါတယ်တဲ.။
အဲဒီလို ဂျပန်မှာ နံပတ်တစ် ထိပ်တန်းဖြစ်ခဲ့တဲ. ဒါရိုက်တာ မီယာဇာ့ကီ ဟာယာ့အို　(MIYAZAKI Hayao)　ရဲ. “ချောက်ကမ်းပါးကြီးပေါ်က ပို.ညို” ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကို၂၀၀၉ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၄ရက်နေ.မှာတော့ အမေရိကတိုက်တစ်ခုံးလုံးမှာ စတင်ပြသလိုက်ပါတယ်။
နယူးယောက် လူစည်ကားရာ တိုင်းမ်ဆကွဲယားအနီးက ရုပ်ရှင်ရုံမှာတော့ ပထမဦးဆုံးပွဲရုံတင်ပြသတဲ. နေ့မှာပဲ၊ ခလေးတွေနဲ. မိသားစုလိုက်လာကြတာ မနည်းပါဘူးတဲ.၊ ရုပ်ရှင်ပြီးသွားလို. ရုံထဲကထွက်လာကြတဲ. ခလေးတွေကတော့ “ပို.ညိုပို.ညို ပို.ညို” ဆိုတဲ. သီချင်းကလေးတညည်းညည်းနဲ. ပြုံးပျော်ရွှင်ပြီးထွက်လာကြတေ့ာတာပါပဲတဲ.။
အောက်မှာသီချင်းစာသားကို မြန်မာလိုလိုက်ဆိုနိုင်အောင် ဆီလျော်သလိုဘာသာပြန်ထားပါတယ်၊ အကယ်၍ တူရိယာပစ္စည်း၊တီးဝိုင်းနှင့် သီဆိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ့ထက်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးပါမယ်)
ဘာဖြစ်လို.လည်းဆိုတော့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ဘာသာမျိုးစုံနဲ. ပြန်ဆိုထားကြလို.ပါပဲ။
ပို.ညို ပို.ညို ငါးပေါက်မလေးပါ
ပို.ညိုပို.ညို ပို.ညို ဖေါင်းအိဖေါင်းအိလေး
ဗျတ် ဗျတ် ဗျတ် ဗျတ် ဗျတ် ဗျတ် ဗျတ် ဗျတ်
ခြေထောက်ရှိတာ တကယ်ကောင်း၊ လမ်းလျှောက်ပစ်လိုက်မယ်နော်
အဲဒီကောင်မလေးနဲ. ခုန်ကြည့်လိုက်ပါ ရင်တွေတောင်တုန်သွားမယ်နော်
အဲဒီကောင်မလေးကို အချစ်ဆုံးပဲ နီတာရဲလေး
ပို.ညို ပို.ညို ပို.ညို နီတာတာရဲမလေး
ကြည်. နော် ကြည်. ပါ၊ သေချာကြည့်ပါအုန်း
ဒီခလေးလေးကို အချစ်ဆုံးပဲ နီတာရဲလေး
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Friday, August 07, 2009